Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Nyeredzi - Kuberekwazve Kwekutsvakurudza
Kuberekwazve Kwekutsvaga Nyeredzi
Pfungwa yeReincarnationResearch.com inotsvakurudza inopa uchapupu kana uchapupu hwekuzvarwa patsva uye hupenyu hwekare.
Vanhu vanopa kuReincarnationResearch.com ndivo Nyeredzi dzedu. Zvipo zvako zvichashandiswa kushandura kiyi akazvitsvakurudza zvinyorwa zvekuberekwazvezve, kusanganisira vazhinji vakadzidza naIan Stevenson, MD weYunivhesiti yeVirginia, mumitauro yakawanda.
Kupararira kwezviitiko izvi zvekuberekwazve kuchabatsira kusika nyika inorugare nekuratidza izvozvo chitendero, nyika uye kusangana kwemadzinza kunogona kuchinja kubvira panguva yeupenyu kuenda kune imwe.
Iyo protocol yekushandura inotsanangurwa pane yedu Mission Statement.
Mukuwedzera, mari ichashandiswa mberi nekufambisa kwewebhu yedu nekuumba mhirizhonga yepasi rose inotsigira kutsvaga patsva nekutsvaga kwehupfumi hunogona kubudirira kubva kune uchapupu hwekuzvarwa patsva.
Mifananidzo yakapiwa kurudyi inobva kuKuberekwa Kwekuzvarwa Kwemweya kwakaitwa muMarina del Rey, California munaOctober 2008.